Insurance Technology Cusub oo ay hirgelisay Jihan Abass | Hargeysa World~Herald
Insurance Technology Cusub oo ay hirgelisay Jihan Abass
UncategorizedInsurance Technology Cusub oo ay hirgelisay Jihan Abass
Lami Insurance Technology waa hindisihii innan u dhalatay dalkaasi Kenya oo lagu magacaabo Jihan Abass. Taasoo ka caawineysa ganacsata inay sameeyaan qaab caymis ah oo khuseysa alaabta uu iibanayo.
Ceymiska Afrika ka jira ayaa lagu qiyaasaa mid aad u yar, 2.78%. “Sababtana waxaa lagu qiyaasaa inay tahay in dhaqaalaha qoyka soo galaaba uu yar yahay markaaba ay diidaan inay lacag kale oo dheeraad ah bixiyaan si ay ceymis u gashadadaan alaabada ay iibsanayaan” waxaa tiri Jihan Abass mar ay u warameysay Quartz Afrika.
Markaa inta badan Afrika markuu qofku wax iibsado waa uu iskaga tawakalaa, haddii markii u xumaadana waa uu iska tuuraa, iyadoo laga yaabo inaaney wax weyn oo ka xumi uusan jirin.
Haddii markaa uu ceymis lahaan lahaa meeshii uu ka iibsaday ayu uku noqon lahaa, ka dibna waa loo sameyn lahaa ama mid kale ayaa loogu soo bedeli lahaa.
Jihan oo markeedii hore ka shaqeyn jirtay UK Trading House ayaa hindistay barnaamijyo kale oo ceymis gawaadhida & caafimaadka ah.
Jihan Abass iyo Shirkaddeeda Lami Insurance Technology waxay dhawaan ku guuleysteen ilaa ku dhawaad $2 million oo ah lacag horumaris ah, si ay ugu hirgeliso barnaamijkan. Lacagtan waxaa siiyay hayadda lagu magacaabo Accion Venture Lab. Accion oo ay xarunteeda magaalo madaxda Mareykanka ee Washington DC waxay ku dadaashaa inay hergeliso maalgelino wax ku soo kordhin karo bulshooyinka kala duwan ee caalamka.